Cottage | November 2019
Mulkiilaha beerta oo dhan wuxuu doonayaa in uu isha ku hayo marka la eego qiyaasta saxda ah iyo khadadka saxda ah, iyo in gebi ahaanba dhulka hoose ee si buuxda uula socdaan dhammaan fikradaha mustaqbalka milkiilaha, qorshahiisa haboon ayaa iman doona badbaadada. Sidee loo wajahaa arrimaha qorshaynta? In aad ku fekereysid inaad ka fikirto qaabeynta beerta beerta lix ama wax ka badan acres, marka hore dhamaantood ka jawaab su'aalaha soo socda: Waa maxay gargaarka degaanka?
Sida loo sameeyo isuduwid loogu talagalay bixinta
Xilliga kuleylka ayaa shaki la'aan noqon doona goobaha ugu badan ee la raadsado iyo kuwa jecel ee qoyska oo dhan. Waxay ku haboon tahay kulaylka saaxiibtinimo ee lala yeesho kebabs ama barbecue. Shirkad ballaadhan oo ku habboon shirkad weyn ayaa si fudud u degi karta. Arbor gacmahaaga, dooran qalabka dhismaha Sidaa darteed, waa la go'aamiyaa!
Shidaalku waa inuu siiyaa, taasina waa mid ka fiican sidii loo dooran lahaa
Shirkadaha gawaarida iyo mishiinka gawaarida aad ayay u habboon yihiin, iswaafajin karaan, oo ay ku habboon yihiin, shaqeyn karaan goob kasta. Waxay la qabsadaan cawska aagagga leh dhulal kala duwan iyo qiyaaso kala duwan. Gaar ahaan faa'iido leh waxay u isticmaalaan meelaha cidhiidhiga ah, oo ay adag tahay in la gaaro cawska cawska. Intaa waxa dheer, way ka jaban yihiin, wayna fududaan karaan inay ka ilaaliyaan cawska.
Sidee iyo waxa aad ka samayn karto pergola dalka oo leh gacmahooda
Dib-u-eegista guryaha xayawaanka ayaa had iyo jeer haysta mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan fikradaha milkiilaha. Marka guriga la dhiso, beerta iyo beerta lagu beeray, waxaan rabaa inaan helo meel aad ku nasto. Halkaan waxaad ka heleysaa gargaarka dhismaha, oo la abuuri karo wakhti gaaban isla markaana samee naftaada. Ka feker sidii aad u dhisi lahayd pergola gacmahaaga, akhri talaabada adoo raacaya tilmaamaha iyo sawirada qaababka ugu quruxda badan.
Xilliga jimicsiga waxaad badanaa rabtaa inaad ku fariisato hawada cusub, fiiri buug ama soo dhawow dabeecadda si aan qorraxdu u faragelin. Tiknoolajigu weli ma istaagayo, iyo waqtigayaga, dad badan ayaa sameeya qoraallada xagaaga ee laga sameeyay polycarbonate - qalab wax ka helay arimo badan oo waxqabadyo ah. Maantana waxaan baran doonaa sida loo dhiso farsamoyaqaano polikarbonat oo gacmaheena leh, qiimeyno faa iidada iyo khasaarinta, iyo si taxadar leh u qor talaabooyinka dhismaha.
Sidee loo dhisi karaa maqaasiinka dalka?
Dhab ahaantii qof walba oo deggan xaafadda ayaa leh maqnaanshihiisa goobta. Iyo kuwa aan haysan, waxay u badan tahay, inay leeyihiin wax ka badan hal mar waxay ka fikireen dhismaha noocan oo kale ah. Kaydinta ilaalinta mooska ayaa muddo dheer ku dhaqma dadka. Sidaa daraadeed, maqaalkani waxaan kuu sheegi doonaa sidii aad u samaysan lahayd maqaasiinka gacmahaaga iyada oo aan wax caawimo ah ka dhicin.
Kacbada waxay ka samaysan yihiin dhagax gacmahooda
Haddii aad inta badan ku kariso kebabs deyrka, ka dibna, marka hore, waxaad u baahan tahay inaad soo iibsato shaashadda ama ku dhejiso naqshadaynta dhagaxyada. Qaadashada birta la iibsado waxay u egtahay mid seddex geesood ah, haddii ayna jirin wax meel u dhigma dhammaadka cuntada, dhismaha birta ayaa si degdeg ah u dhalaalaya oo u noqda mid aan la isticmaali karin. Gaar ahaan tan aad u baahan tahay inaad bixiso qadar qiimo leh oo ku saabsan iibsigeeda.
Sidee loo sameeyaa beerta quruxda badan leh ee gacmahaaga?
Nasashada dalka oo carruurta leh ayaa laga yaabaa in laga dhigo mid xitaa ka raaxaysta iyagoo siinaya bogga leh waxyaabo iyo waxyaabo xiiso leh. Kani waa geeska barbecue, iyo goobta ciyaarta ama qolka oo dhan. Maqaalkani waxaan eegeynaa soo saarista iyo isu-geynta alwaaxda alwaaxda ah si aad u siisid gacmahaaga, sawirrada iyo sawirrada kala duwan ee dhismooyinka.
Xirfadaha DIY ee beerta: sida loo sameeyo boodh (sawir leh)
Maanta, bannaanka u isku dayaya in ay la yaabaan ma aha oo kaliya by beerto geedaha asalka ah iyo dhif ah, laakiin sidoo kale by qurxinta sirqoolladooda. Ladybug, gacanta by, waa farshaxan aad u aan caadi ahayn iyo dabeecada beerta dhameystiran. Laga soo bilaabo dhagaxyada loogu talagalay soo saarida ladybugs, waxaan u baahan nahay: qalinka galaaska madow; qalin-qori; buro dhowr ah; rinji akrilik iyo calyada; xabagta qaar loogu talagalay xabagta
Tiknoolajiyada si loo abuuro saqaf soo daboolan oo leh labo darbi oo derbi ah ayaa ka mid ah kuwa ugu caansan caalamka. Waxay ka dhigeysaa suurtagal in la dhiso qaabka ugu badan ee dhammaan noocyada roobabka, iyo sidoo kale in la abuuro qolal qiyaastiisu weyn tahay. Si kastaba ha ahaatee, inkastoo ay fududahay dhismaha saqafka sida, dhismayaasha badan, dhismaha hiwaayadda ee qaabkan ayaa noqonaya hawl adag.
Foornada kulaylka gubashada dheeraadka ah ee bixinta
Meelaha dhaadheer oo gubanaya oo kulayliye ah oo dabiiciga ah oo lagu diyaariyo hababka warshadaha ama gacmahaaga (adiga keligaa ah) leh shidaal joogto ah oo madaxbannaan? muddada la qabsasho ee gubashada. Qeexidda ereyga "gubasho waqti dheer ah" Foornada caadiga ah, shidaalka shidaalka ayaa gubanaya dhowr saacadood gudahood, si dhakhso ah ayuu u kululeeyaa qolka, laakiin sidoo kale si deg deg ah ayuu u qaboojiyaa.
Sida loo xareeyo saqafka salka aqalka
Attic - tani waa qol aad u jilicsan, oo si toos ah u hoos yaal saqafka, taas oo ah, xaqiiqda, waa hoyga degaanka. Maanta waxaa sii kordhaya isticmaalka dhismayaasha guryaha iyo ceymiska. Si kastaba ha noqotee, marka loo isticmaalo qolka fadhiga sida qolka fadhiga, waa in maskaxda lagu hayaa in saqafka sifududka sare leh loo baahan doono, maadaama ay noqon karto mid aad u qabow oo qoyan xilliga qaboobaha iyo kulul aad u kulul xagaaga.
Sidee ubaxyadaada uga sameysan kartaa dhalooyinka caaga ah
Maalin kasta, bini'aadanku waxay gooyaan xaddi badan oo badeecooyin caag ah, oo aan ka fikirin deegaanka, laakiin qashinka noocan ah waxaa loo isticmaali karaa nolol maalmeedka. Gaar ahaan, xirfadlayaasha badan ayaa ku habboon inay soo saaraan ubax dhalo caag ah oo madhan oo loogu talagalay qurxinta gudaha iyo kan duurka. Sida loo sameeyo tan iyo waxa faa'iido leh, tixgeli xiga.
Sooner ama wakhti dambe, milkiilayaasha dachas, oo aan nasiib u lahayn in ay helaan biyo dhexdhexaad ah, ka feker su'aalaha helitaanka ilo biyo ah. Xaaladdan oo kale, xulashada keli ah waa baaxadda dhulka hoostiisa. Si go'aan looga gaadho hababka wax soo saarka biyaha si loo doorto - si fiican ama ceel, waa in ay ogaadaan faa'iidooyinka iyo khasaare kasta oo iyaga ka mid ah.
Sida loo helo biyaha goobta ceelka: tayada biyaha, qalabka
Maqnaanshaha biyaha ee aagga banaanbaxa, milkiilayaashu waxay inta badan ku lug leeyihiin ceelasha qodista ama ceelasha qodaya. Waa muhiim in biyaha uu ahaa tayo wanaagsan. Taasina waa sababta, xitaa ka hor inta aanad bilaabin shaqada, waxaa habboon in aad si faahfaahsan uga fiirsato dhacdooyinka biyaha dhulka, noocyada kala duwan iyo hababka raadinta, iyo sidoo kale hababka lagu ogaanayo tayada biyaha la cabbo - waxaanu ku falanqeyn doonaa dhammaan arrimahan.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Cottage 2019